I-Nomad ikhupha isiSeko seTshaja yokuGqibela yeMagSafe | Ndisuka mac
I-Nomad ikhupha i-Ultimate MagSafe Charger Dock
Sisiseko apho abasebenzisi abanetshaja esemthethweni yeApple MagSafe ye-iPhone inakho yibeke phantsi kwaye ngokuzolileyo uyibambe etafileni ngesandla esinye. Kwaye kukuba isiseko sokutshaja se-iPhone silungile ngokwenene kodwa xa ufuna ukukhupha isixhobo esivela ku "tshaja" kufuneka usebenzise izandla zozibini.
Ngalesi siseko seNomad sokutshaja (esingabandakanyi itshaja) eyakhelwe ngokwesiqhelo ukufaka itshaja ye-iPhone MagSafe, akusekho ngxaki kule meko. Inkxaso leyo ithengisa phantse iidola ezingama-50 Kugqityiwe kwelona nyulu "isitayile seApple" kunye nezinto ezisemgangathweni.
Insimbi engenasici yi-protagonist kwesi siseko. Ke asizukuba neengxaki zokunqongophala komgangatho kwaye ubunzima bayo buthetha ukuba ungaphakamisa i-iPhone kwitafile ngaphandle kokuthatha itshaja nge-iPhone. Into elula ukucinga ngayo kwaye singatsho ukuba siyenze kodwa ayikhange isungule kwi-Apple uqobo.
UNomad yingcali kolu hlobo lwezinto ezinje ngezixhobo zokutshaja kwaye kule meko isinika ividiyo apho ibonisa khona iinkcukacha zayo.
Ukuba ufuna ukubona isiseko kwiwebhusayithi esemthethweni ye Nomad ungayenza ukusuka apha. Sele ikhona ukuthengwa kodwa kule meko, ngokubhekisele kwezinye izinto zenkampani, Sincoma ukusebenzisa iMacnificos iwebhusayithi ukwenza ukuthengwa kwilizwe lethu, ukuthintela iingxaki kumasiko kunye neendleko eziphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Nomad ikhupha i-Ultimate MagSafe Charger Dock
I-Apple's Fumana isiXhobo sam sokuFumana sele sine-app yesilingo
Iingcali zaseTshayina zilawula ukwandisa i-RAM kunye ne-SSD yeApple Silicon